Xiritaankii isbitalka Sheikh Zayed ee Muqdisho iyo siyaasadeynta gargaarka bani aadannimo - Caasimada Online
Home Warar Xiritaankii isbitalka Sheikh Zayed ee Muqdisho iyo siyaasadeynta gargaarka bani aadannimo
Xiritaankii isbitalka Sheikh Zayed ee Muqdisho iyo siyaasadeynta gargaarka bani aadannimo
12-Maarso-2018; Golasha shacabka ee Soomaaliya ayaa soosaaray xeerka dhowridda gobonimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed; kaas oo Shirkadda dekadaha ee Dubay ka mamnuucaya ka howlgelidda Dalka Soomaaliya, taasina waxa ay si aan toos ahayn u taabatay danaha Imaaraadka ee Bariga Afrika, kuwaas oo wax xoogaa caqabad ah kala kulmay dhinaca dekedda Dooraale ee Jamhuuriyadda Jabbuuti.
Wasaaradda Arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Imaaraadka ayaa ku sheegtay war-murtiyeed ay soosaartay laba maalin kadib dhacdada in tallaabada ay qaadday Soomaaliya ay tahay mid halis ah oo baal marsan Qaanuunka, waxa ay ku tilmaantay tallaabada ay ciidanka nabadgelyada Soomaaliya ku xayireen diyaaradda Imaaraadka iyo lacagtii saarnaydba ay tahay mid gef ku ah caadooyinka iyo dhaqamada Diblomaasiyadeed ee u dhexeysa dowladaha,
Isbitaalkan oo si lacag la’aan ah u daaweyn jiray 200-300; oo bukaan kuwaas oo kamid ah dadka Saboolka ah iyo barakacayaasha ayaa xiritaankiisa waxa ku lug yeeshay khilaafka diblomaasiyadeed ee Imaaraadka iyo Soomaaliya, taas oo xad-gudub iyo xeer jebin ku ah xeerka caalamiga ah ee Bani’aadminimada iyo howlaha bani’aadminimo IHL(International Humanitarian law).
Xeerka caalamiga ah ee Bani’aadminimadu waxa uu koobayaa dhammaan heshiisyada caalamiga ah iyo caadooyinka dowladaha ee dammaad qaada xushmeynta aadanaha, illaaliya labada qaybood ee xuquuqdiisa, Tan shaqsiga ah iyo midda siyaasiga ahba, xilliyada Nabadda iyo Collaadda labadaba, kaasina waa xeerka loo yaqaan Qaanuunka Caalamiga ah ee xuquuqda Aadanaha.
Soomaaliya waxa aan weli ka dhammaan Iska-hor-imaadyada hubeysan, kuwaas oo sababay in rayid badan ay ka barakacaan deegaanadooda, iyada oo qaarkood ku nool yahay xaalad nolol oo aad u adag.
Qaanuunka Caalamiga ah ee Bani’aadminimadu waxa uu illaalinayaa 5; koox oo wada-jooga ama qaarkood ay joogaan goobaha ay ka jiraan khilaafyada siyaasadeed, kuwaas oo uu siinayo dhowrid gaar ahaaneed, waxa kamid ah:
Sida uu dhigayo Borotokolka koowaad ee dheereedka ah 1977; ee heshiiskii Jineefa, cutubka koowaad, qodobka 8;aad (Additional Protocol one of the Geneva Convention 1977)
Bukaanada iyo Dhaawaca: Waxa ay noqon karaan ciidan ama Rayid u baahan taageero caafimaad sababtu waxa ay noqon kartaa dhibaato soo gaartay, Xannuun, isku dhexyaac, dhibaato jireed ama mid caqli, carruurta iyo ilmaha dhowaan dhashay, dadka u baahan gargaarka degdegga ah iyo haweenka Uurka leh dhammaantood waxa ay ka caaggan yihiin nooc walba oo u muuqan kara fal cadowtinimo.
Isutagga Imaaraadka Carabtu waxa ay sheegeen maalin kadib markii ciidanka ammaanka Soomaaliya ay qabteen diyaaradda Royal Jet iyo lacagtii ay waddayba in ay joojinayaan mashruuca tababarka millateriga Soomaaliya, basle waxa ay 17-April-2018; albaabada u laabeen Isbitaalka Sheekh sayed; oo ahaa kaalmo bani’aadnimo oo ka madax bannaan siyaasadda, taas oo ah tallaabo si cad u jebineysa qaanuunka caalamiga ah ee Bani’aadminimada (Clear violation of international humanitarian law)
Marka dhinacaas laga istaago go’aanka xukuumadda Isutagga Imaaraadka Carabtu ee xritaanka Isbitaalka Sheekh Zayed ee Muqdisho waxa lagayaabaa in uu si taban (Negative) u saameeyey bukaanadii ka faa’iideysan jiray Isbitaalka sheikh Zayed; oo badankoodu ahaa dadka rayidka ah ee ay sida xun u saameeyeen iska-hor-imaadyada husbeysan, sidaas oo kale waxa uu go’aankaasi saameeyey howshii Bani’aadminimo ee bixinayey isbitaalku, taasina waxa ya timid kaddib tallaabo u muuqatay isku xir mashaariicda gargaarka Bani’aadminimo iyo tababarka ciidan, taas oo si walba u khilaafsan anshaxa iyo dhaqanka dowladaha qaybta ka ah Qaanuunka Caalamiga ah ee Bani’aadminimada.
Qaanuunka Caalamiga ah ee Bani’aadminimada (QCB); waxa uu ku dhisan yahay mabaadii bani’aadminimo, kuwaas oo ubucda heshiiska inta badan dowladaha adduunka, kuwaas oo qayb ka ah heshiisyada caalamiga ah.
Mabda’an waxa loola jeedaa in ruux walba uu si qof ahaan u helo ladhaqan bani’aadminimo, iyada oo aan shaqsiyaddiisa ama ujeeddo kale laga lahyan, taas oo ah in qofku uu u helo macaamal wanaagsan oo kali ah in uu yahay bani’aadam, waxa aan mabaadiidaas ka soo qaadayaa kan ku habboon maqaalkan
Marka la eego mabaadiidan oo ku jira heshiiska caalamiga ah ee dhowridda iyo xannaaneynta dadka liita go’aanka IIC; waxa suuragal ah in go’aanka joojinta kaalmo bani’aadminimo iyo isku xirka howlaha Insaaniga ah iyo Siyaasaddu ay xarigga nolosha (Life line) ka jaraan bukaano iyo dad tag daran oo ay iska-hor-imaadyada hubeysan ee weli ka jira Soomaaliya ay saameeyeen, waxa ay dadkaas rayidka ah oo kamid ah qoysaska barakacayaasha iyo dadka liita ee aan haysna dhaqaale ay ku iibsadaan dawo iyo adeeg caafimaad ka faa’iideysan jireen si lacag la’aan ah howhsii bani’aadminimo ee uu bixinayey Isbitaalka Sheekh Zayed ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay suuragal tahay in ay u dhintaan sabab la xiriirta joojinta adeeggaas iyo xiritaanka Isbitaalkaas.
Iyada oo laga faa’iideysanayo heshiisyada caalamiga ah ee Jinefa iyo labadooda Baratokool ee dheeriga ah ee 1977 (Geneva Convention and their two Additional Protocols of 1977), oo ay Dowladda IIC; qayb ka tahay lana dhowrayo qaanuunka caalamiga ee Bani’aadminimada xukuumadda IIC; waxa ay ku la kacday dad rayid ah fal sababi kara dhimasho ama dhaawac halis ah oo aan lahayn sabab iyo dhinac kale oo lagu banneysto, waxa ay si toos ah ugu xadgudubtay mabaadiida waaweyn ee xeerka caalamiga ee Bani’aadminimada, kaas oo dhammaan dowladaha dunidu ay qayb ka yihiin, ayna tahay waajib iyo dhaqan dowladnimo in waddan walba ixtiraamo.
Marka laga shidaal qaato hadalka danjiraha IIC ee Soomaaliya; Maxamed Axmed Cismaan go’aanka joojinta kaalmada Bani’aadminimo ee Isbitaalka Sheekh Zayed waxa uu sababi kartaa saameyn xun oo gaarta 300+; oo bukaan oo ah dad rayid ah oo isugu jira bukaan jiif iyo bukaan socod oo ku xirnaa isbitaalkaasi, waxa ay waayeen halmar iyo ogeysiin la’aan adeeggii caafimaad kaas oo safaaradda IIC; u ballan qaadday dowladda Soomaaliyeed in uu soconayo yahayna deeq bani’aadmino oo dowladda IIC; si lacag la’aan ah ku siineyso dadka Soomaaliyeed ee ay colaadda iyo saboolnimadu waxyeeleen.
Go’aankaasi waxa uu si toos ah ugu gefeys Insaannimada, waxa uu muujiyey sida madaxda IIC; aanay u dhowrin Qaanuunka Caalamiga ah ee Bani’aadminimada, mar haddii ay bukaan dowo ku socota ka joojiyeen adeeggii caafimaadka, taasina waxa ay horseedi kartaa in dadkii rayidka ahaa ee ka faa’iideysanayey adeegga lacag la’aanta ah ee Isbitaalka la xiray ee sheikh Zayed ay la kulmaan dhimasho iyo rajo la’aan uu sababat go’aanka joojinta howlaha bani’aadminimo iyo xiritaanka Isbitaalka Sheekh Zayed ee Muqdisho.
W/Q: Axmed Guutaale, Dersa sharciga iyo qaanuunka